गाडी बेच्दा जनता ठग्ने कम्पनीको राज्य माथिपनि चरम लुट ! चुडामणि शर्मासँग मिलेर १२ करोड बढी करछली !
ARCHIVE, INVESTIGATION, POWER NEWS » गाडी बेच्दा जनता ठग्ने कम्पनीको राज्य माथिपनि चरम लुट ! चुडामणि शर्मासँग मिलेर १२ करोड बढी करछली !
काठमाडौँ - प्रचलित ऐन विपरित हुन्डाईका गाडीहरुमा कालो बजारी गरिरहेको कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले देशमाथि चरम लुट मच्चाउँदै कर छली गरेको प्रमाणित भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँग मिलेर कम्पनीले १२ करोड बढी कर छली गरेको खुलासा भएको हो ।
कर फछ्र्योट आयोगबाट कम्पनीले १२ करोड भन्दा बढी कर चुडामणि शर्माको मिलेमतोमा छली गरेको छ । शर्माको मिलेमतोमा कम्पनीले कुल ३० लाख मात्रै कर तिरेर कुल १२९६९६७७८ रुपैयाँ कर छुटमा पारी राज्यमाथि चरम लुट गरेको खुलासा भएको हो ।
यो कर छलीमा मिलेमतो गर्ने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा अहिले अख्तियारको निशानामा छन् भने अव यो अनुसन्धान सकिएपछि कर छली गर्ने यो कम्पनीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
स्मरण रहोस्, यो कम्पनीले राजनीतिक पावरकै भरमा प्रचलित ऐन विपरित गाडी बेचेर अकुत नाफा कमाईरहेको छ । अहिलेपनि यो कम्पनीले खुलेआम जनता ठग्दापनि सम्बन्धित निकाय मौन छ ।